A mara ọkwa LG K62 na LG K52: Nnukwu ihuenyo na igwefoto azụ anọ | Gam akporosis
A mara ọkwa LG K62 na LG K52: Nnukwu ihuenyo na igwefoto azụ anọ
Onyeka Onwenu | | LG, Mobiles
LG ewebata ngụkọta nke ekwentị ọhụrụ abụọ iji gbakwunye na akara K n'okpuru LG K62 na LG K52 aha, ha abụọ bụ ngwaọrụ ntinye. Ihe kachasị ike n'ime ihe niile bụ nke kachasị ukwuu, K62 ma na-etu ọnụ Full HD + n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo 7-inch.
Ha bụ ekwentị abụọ agbakwunyere na nke ọzọ LG K42, ọnụ na-eweta ihe karịrị ụbọchị atọ gara aga na nke ahụ ga-ebute ahịa Korea na mbụ. Companylọ ọrụ ahụ soro ya LG K31, LG G92 na abụọ nke ya nnukwu nzọ, na LG Velvet y Lg nku, ndị a ngwaọrụ na-iji na-eji ọkụ na-achọ ike na elu-ọsọ Njikọta.
1 LG K62, ndị dị ike nke ezinụlọ
2 LG K52, a ama mere ịrụ
3 Nnweta na ọnụahịa
LG K62, ndị dị ike nke ezinụlọ
LG ekwuputala LG K62 ohuru, smartphone nwere ihuenyo 6,6-anụ ọhịa IPS LCD na mkpebi Full HD +, 20: 9 Ratio na Gorilla Glass nchedo. Igwefoto selfie nke dị n'ihu bụ 28pipixels, na-ekwe nkwa foto kacha mma na vidiyo na Full HD + nke kacha mma.
Ihe nhazi nke ekwentị a bụ Helio P35 na ọsọ nke 2,3 GHz, PowerVR GE8320 graphics chip, 4 GB nke Ram na 128 GB nchekwa na ohere nke ịgbasa ya. Batrị ahụ bụ 4.400 mAh nke a ga-akwụ ụgwọ site na njikọ USB-C na ọsọ ọsọ ha anaghị akọwapụta.
LG K62 nwere ese foto azụ anọ, ihe dị mkpa bụ megapixels 48, nke abụọ bụ 5 megapixel ultra-wide unit, nke atọ bụ nnukwu megapixel 2 na nke anọ bụ megapixel miri emi. Ọ nwere njikọ 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS na njikọ USB-C. Akpụkpọ ụkwụ 4 gam akporo ozugbo ngwaọrụ malitere.
IKIRU 6.6-anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi Full HD + - Ọnụ: 20: 9 - Gorilla Glass
Nhazi Helio P35
Graf IkeVR GE8320
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB - Mgbasa site na kaadị MicroSD
Gbanwee CAMERA 48 Megapixel isi ihe mmetụta - 5 MP Ultra Wide Sensor - 2 MP Macro Sensor - 2 MP Omimi ihe mmetụta
CAMERA N'IHU 28 MP
UMUAKA 4.400 mAh na-akwụ ụgwọ USB-C
OS gam akporo 10
Njikọ 4G / WiFi / Bluetooth / USB-C njikọ
Atụmatụ ndị ọzọ Akwụkwọ mkpịsị aka na-abịanụ - bọtịnụ Enyemaka Google
Mbibi na ibu ibu -
LG K52, a ama mere ịrụ
El LG K52 bụ ụdị ntinye ọhụụ nwere otu ihuenyo 6,6-inch, ma na nke a mkpebi ahụ na-aghọ HD + nke pikselụ 1.600 x 720. Igwefoto n'ihu na-adaba n'ụzọ dị nro na 13 megapixels, mana ọ na-agbachitere onwe ya mgbe ọ bịara ịdekọ ihe oyiyi na ịme nzukọ vidiyo dị mma.
Modeldị ọhụrụ a bia na otu CPU, Helio P35 tinyere kaadi eserese ejikọtara, wunye 4 GB nke Ram na 64 GB nke ohere nchekwa. Batrị ahụ dị 4.000 mAh, mana na nke a ọ naghị agba ọsọ ọsọ na ị ga-ahọrọ ụgwọ ọkọlọtọ dị ka ekwentị ndị gara aga.
LG K52 biara na igwe foto dika nke LG K62, nke kachasị bụ 48 MP, nke abụọ bụ 5 MP, nke atọ bụ macro 2 MP na nke anọ bụ omimi 2 MP. Dị ka K62, ọ bụ ọnụ 4G, ọ na-etinye Wi-Fi, Bluetooth, GPS na njikọ USB. Usoro a bu Android 10 n’okpuru LG interface.
IKIRU 6.6-anụ ọhịa IPS LCD na mkpebi HD +
Ohere TERLỌ N'IME 64 GB
CAMERA N'IHU 13 MP
UMUAKA 4.000 mAh
Njikọ 4G / WiFi / GPS / Bluetooth
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị aka na-abịaghachi
Nnweta na ọnụahịa
Ọbịbịa nke LG K62 ọhụrụ na LG K52 ga-abụ na mbido Ọktọba, nke abụọ ga-abata na agba atọ: ọcha, ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ. N'oge ahụ onye nrụpụta ahụ akọwapụtaghị ọnụahịa nke ụdị abụọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ gaghị ewe ogologo oge ịmara ego otu na nke ọzọ ga-efu na South Korea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A mara ọkwa LG K62 na LG K52: Nnukwu ihuenyo na igwefoto azụ anọ
Xiaomi Mi Band 4 NFC ga-ekwe ka ego ịkwụ ụgwọ na Europe
Wuchara ihe mbido mbụ nke Samsung Galaxy S21